Finn Balor dia milaza fa hiverina ny WWE ny 'The Demon King' - Wwe
Finn Balor dia milaza fa hiverina ny WWE ny 'The Demon King'
Efa ho herintaona izay no niverenan'i Finn Balor tamin'ny NXT ary izy indray no endrik'ilay marika mainty sy volamena. Resin'i Balor i Adam Cole tamin'ny Super talata II mba hisamborana ny Tompondakan'ny NXT nafoina.
Ilay Champion NXT indroa izao dia niresaka Digital Spy taorian'ny namerenany ny anaram-boninahitra notanany farany tamin'ny 2016. Nilaza izy rehefa afaka efa-taona lasa izay, nahatsiaro ho velombelona indray izy rehefa tafaverina tao amin'ny NXT ary niantso ny fandreseny ho toy ny ranomandry rehefa avy nandany 11 volana lasa izay nifaninana tamin'ireo mpikatroka tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
'Amin'ny RAW sy SmackDown dia nanjary nifankahalala tsara tamin'ireo olona nifoniko isan'alina. Mahatsiaro ho toy ny karazana maody autopilot aho, fanaraha-maso sambo. Fantatro ny fihetsiky ny tsirairay, fantatro ny nuansa rehetra ary fantatro ny fomba fiasan'izy ireo sy ny zavatra hataon'izy ireo alohan'ny hanaovany izany. Nilaiko ny singa tsy nampoizina, ilay adrenalinina nanao hoe, 'inona no hataon'ity olona ity?'. Ny hany fomba nahafahako nahazo izany dia ny niaraka tamin'ny ankizilahy vaovao ary izany no natolotr'i NXT. '
Niaiky i Balor fa nahatsapa ho toy ny mandeha amin'ny autopilot izy indraindray nandritra ny fihazakazahana lehibe indrindra nataony, saingy tsapany tanteraka fa niverina ny adrenalinina rehefa nifikitra tamin'ny olon-tiana Tommaso Ciampa sy Johnny Gargano voalohany.
- Finn Bálor (@FinnBalor) 9 septambra 2020
Lafiny iray amin'ny toetran'ny Balor izay mbola tsy hitan'ny mpankafy NXT hatramin'ny niverenany tao amin'ny NXT ny fiovàny, 'The Demon King'. Nilaza i Balor fa hiverina ny Mpanjaka Demony indray andro any, rehefa tonga ny fotoana mety.
Ny mpanjaka demonia dia lasa tehina ho an'i Finn Balor
Resadresaka feno: https://t.co/RzDjNfOnXW
- Stephanie Chase (@stephaniemchase) 10 septambra 2020
Ireo mpankafy WWE dia nampifandraisina voalohany tamin'ny persona The Demon nandritra ny fihazakazahan'i Finn Balor voalohany tao amin'ny NXT, fa i Balor kosa tamin'ny voalohany dia nametraka ny makiazy ho an'ny lalao ao amin'ny Tokyo Dome. Tsikelikely fa azo antoka nandritra ny taona maro, nitombo lasa orinasa misaraka tanteraka izy io.
Rehefa nanakatra ny lisitra WWE lehibe i Balor tamin'ny taona 2016, nilaza izy fa tsy voafehiny intsony io orinasa io ary lasa sakana ho azy ny alatsinainy alina RAW sy ny zoma alina SmackDown.
Raha mbola tsy nipoitra i The Demon hatramin'ny niverenany NXT, dia nilaza tamin'ny Digital Spy i Finn Balor fa tsy midika izany fa tsy hitranga izany indray andro any:
'Mahatsapa aho fa misy fotoana sy toerana ho an'ny zava-drehetra fa amin'izao fotoana izao dia tsapako fa ny toetra The Demon dia zavatra mety ho dingana iray amin'ny làlana ratsy nataoko nandritra izay 11 volana lasa izay tao amin'ny NXT.'
Azo antoka fa toa i Balor no mikasa hiverina hiady amin'ny alatsinainy na zoma alina amin'ny fotoana ho avy. Nolazainy fa te hiasa indray miaraka amin'ireo mpifaninana aminy taloha, saingy nilaza indray izy fa mifantoka amin'ny ho avy tsy ho ela ny fiarovana ny lohateniny NXT vao azony.
'Hisy ny fotoana sy toerana ahazoantsika ny The Demon vs. Bray Wyatt, izay ahazoantsika The Demon versus Braun Strowman, izay ahazoantsika The Demon versus Brock Lesnar, fa amin'izao fotoana izao dia liana amin'ny fiarovana ny fiadiana ny tompondakan'i NXT aho.'
Tsy maintsy miandry isika ary hijery izay manaraka ho an'i Finn Balor aorian'ny fandreseny an'i Adam Cole ny talata lasa teo
inona no dikan'ny hoe fanoloran-tena amin'ny fifandraisana
inona no mendrika dr dre
ahoana no hilazana raha misy vehivavy tia anao
Ahoana no hoe Miala tsiny aho noho ny very